မြန်မာပြည်မှာ အားရပါးရ စားသုံးနေကြတဲ့ ကင်ဆာအေးဂျင့် စားသောက်ကုန်နဲ့ ပစ္စည်းများအကြောင်း - Myanmar Globe
မြန်မာပြည်မှာ အားရပါးရ စားသုံးနေကြတဲ့ ကင်ဆာအေးဂျင့် စားသောက်ကုန်နဲ့ ပစ္စည်းများအကြောင်း
Posted on 02/01/2022 02/01/2022 Author Admin	Comment(0)
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ကင်ဆာရောဂါ အဖြစ်ပွားဆုံး (၁၀) နိုင်ငံတွင် ပါဝင်လျှက်ရှိသည်။ မိသားစုတစုထဲတွင် ကင်ဆာဝေဒနာရှင် (၃) ဦးထက်မနည်း တွေ့နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အရမ်းအဖြစ်များပြီး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ကင်ဆာဖြစ်စေတတ်သည့် အကြောင်းရင်းများကို မဖြစ်ခင် ရှောင်ရှားနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
၁။ ကင်ဆာကြောက်ရင် ပလတ်စတစ်နဲ့ ဖော့ဗူးရှောင်
ပလပ်စတစ်တွင်ပါဝင်သော ကင်ဆာဖြစ်စေသည့် စတိုင်ရင်း (Styrene) ဓါတ်နှင့် ဒိုင်အောက်ဇင်းဓါတ်များသည် ပူသောအစားအစာ ဆီပါဝင်သောအစားအစာနှင့် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် အစားအစာကို ပလပ်စတစ်နှင့်ထည့်၍ သိုလှောင်ထားပါက အစားအသောက်ထဲသို့ ဓါတ်ပြုပျော်ဝင်၍ ရင်သားကင်ဆာနှင့် ကင်ဆာအမျိုးမျိုး ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲဖြစ်ခြင်းနှင့် မျိုးပွားမှုကို ထိခိုက်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေပါသည်။ (သားသမီးမရသောစုံတွဲများ သတိချပ်ကြပါ။)
မွေးကာစကလေးများကို ပလတ်စတစ်နို့ဗူးဖြင့် နို့မှုန့်တိုက်ခြင်းကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ မိခင်နို့ကို တိုက်ကျွေးခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ စတီးချိုင့် ဖန်ဗူး အင်ဖက် စက္ကူတို့ဖြင့် ပြောင်းလဲထုတ်ပိုးကြပါစို့။ မယ်လမင်းပန်းကန်ပြားသည်လည်း အပူနှင့်ထိတွေ့လျှင် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးစေခြင်းနှင့် ကင်ဆာရောဂါများ ဖြစ်စေ၍ ကြွေပန်းကန် စတီးပန်းကန်များ ပြောင်းလဲအသုံးပြုပါ။
၂။ ကလေးတွေရှောင်ရမည့် လေဖောင်းမုန့်များ
တံဆိပ်အမျိုးမျိုးဖြင့် ကျောင်းမုန့်စျေးတန်းတွင် ရောင်းချနေသည့် လေဖောင်းမုန့်များ (အာလူးကြော်/ချောင်း ဘယာကြော်/ချောင်း ကြက်သွန်ကြော် ငါးမုန့်ကြော် စနက်ခ် Snack များ) စသည်တို့သည် ကြော်ပြီးသားဆီများကို မစွန်းပစ်ပဲ အကြိမ် (၅၀) ထက်မနည်း ပြန်ကြော်နေသည်ကို တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံရှိ စက်ရုံတရုံတွင် စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည်။
ထိုဆီများ၏ အရောင်သည် ကတ္တရာစေးလို မဲနက်နေသည်။ ထိုအကြော်များကို မအေးမီ ပလတ်စတစ်ပါကင်ထဲသို့ထည့်၍ ပလတ်စတစ်မှ ကင်ဆာဖြစ်စေတတ်သော ဓါတ်သတ္ထုများ ထိုအကြော်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သည့်အပြင် ကြောက်စရာကောင်းလှသော ပြန်ကြော်ဆီ အနက်ရောင်များသည်လည်း အသည်းကင်ဆာနှင့် အခြားကင်ဆာအမျိုးမျိုး ဖြစ်စေ၍ ထိုလေဖောင်းမုန့်များကို လုံးဝမစားသင့်ပေ။ ပြည်ပနိုင်ငံမှလာသော ပီကေများတွင်လည်း သကြားတု တားမြစ်ဆိုးဆေး ပလတ်စတစ် ရာဘာများနှင့် ပြုလုပ်ပြီး ပီကေအချို့တွင် ကင်ဆာဖြစ်စေသော တိုက်တေနီယမ်ဓါတ် ပါဝင်ခြင်းကြောင့် လုံးဝမစားသင့်ပေ။
၃။ ပြန်ကြော်ဆီနှင့် ကင်ဆာအန္တရာယ်
ရေမြောင်းဆီခေါ် ပြန်ကြော်ဆီများသည် တရုတ်နိုင်ငံမူဆယ် ၁၀၅ မိုင် လမ်းကြောင်းမှ ဝင်ရောက်လာသလို ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းကော့သောင်း မြဝတီနယ်စပ်မှလည်း ဝင်ရောက်လာကာ ဓါတုဆေးများဖြင့် အရောင်ချွတ် ပဲဆီအနံ့ထည့်ကာ ဆီစျေးကွက်တွင် ပဲဆီသန့်ဟု တံဆိပ်ကပ်၍၎င်း တံဆိပ်မကပ်ပဲ အလွတ်ရောင်းချ၍၎င်း ကျပ် ၂၅၀၀, ၃၀၀၀ ကျပ် ပတ်ဝန်းကျင်ဖြင့် ရောင်းချသည်။
လမ်းဘေးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်များနှင့် စားဖွယ်စုံဆိုင်ကြီးများကို စစ်ဆေးရာ (၁၀) ဆိုင်ကို စစ်ဆေးရာတွင် (၁၀) လုံး အင်ဂျင်ဝိုင် အဟောင်းလို ညိုမဲနေသော ပြန်ကြော်ဆီများဖြင့် စမူဆာ အီကြာကွေး များကိုကြော်နေသဖြင့် ၎င်းတို့ကို စားသုံးမိပါက ပန်ကရိယကင်ဆာ အသံအိုးကင်ဆာ အစာအိမ်လမ်းကြောင်းကင်ဆာ အူမကြီးကင်ဆာ အမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေသည်။
၄။ အချိုမှုန့်နှင့် ကြက်သားမှုန့်များ
ကြက်သားမှုန့် အချိုမှုန့်တွင် ပါဝင်သော ဓာတုပစ္စည်းများသည် ဦးဏှောက်နှင့် အာရုံကြောထိခိုက်စေ၍ လေဖြတ်လေငန်းရောဂါ လေးဖက်နာရောဂါ နှလုံးရောဂါ ကျောက်ကပ်ချို့ယွင်းပျက်စီးစေသောရောဂါ အရိုးပွ အရိုးပါး အရိုးကျွတ်ဆတ်သောရောဂါ ဆီးချို သွေးချို သွေးတိုးရောဂါများကို ဖြစ်ပွားစေ၍ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။
၎င်းတို့အစား ငါးကို ကြက်သွန်အဖြူ အနီ ဂျင်း တို့ဖြင့် ငါးကို ပြုတ်ကာ ငါးရိုးထွင်၍ ဆီတစက်နှစ်စက်ထည့်ပြီး လှော်ပါ။ ထိုငါးအမှုန့်ကို ခြောက်နေအောင်လှော်ပြီး ဟင်းချက်သည့်အခါတိုင်း ထည့်သုံးပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲထားလျှင် ၃ ရက် ခန့်ခံပါသည်။ ငါးတွင် Omega-3 ဓါတ်အများဆုံးပါသည်။
နှာခေါင်းကင်ဆာ အဆုတ်ကင်ဆာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကင်ဆာတို့ကို ဖြစ်ပွားစေသော ခြင်ဆေးခွေတွင် ဓာတုပိုးသတ်ဆေးများထဲ၌ အပြင်းထန်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ထားသော (S.2) ပိုးသတ်ဆေး လွှစာမှုန့် ဗိုင်ဒါကော် ဆိုးဆေးနှင့် ကင်ဆာဖြစ်စေတတ်သော ဖော်မယ်ဒီဟိုက် မီဖာဖလူသရင်း နှင့် ဓာတုအမွှေးအကြိုင်တို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းအပြင် အပြင်းထန်ဆုံး အဆိပ် တမျိုးဖြစ်သည့် Benzene (ဘန်ဇိုင်း) ကာစီနိုဂျင်တစ်မျိုးပါဝင်ပြီး အာရုံကြောမှစ၍ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ အထိ အဆိပ်ဖြစ်စေသည်။
ခြင်ဆေးခွေတခွေ၏ အဆိပ်ဓါတ်သည် စီးကရက်အလိပ်ပေါင်း (၁၃၇) လိပ်မှ ထွက်ရှိသော အဆိပ်မှုန့်ပမာဏနှင့် ညီမျှ၍ ဝေးဝေးကရှောင်ကြဖို့ သတိပေးလိုက်ရပါသည်။ အမွှေးတိုင်များသည်လည်း ခြင်ဆေးခွေကဲ့သို့ပင် အန္တရယ်ရှိလုံးဝမသုံးအပ်ပေ။ ခြင်ဆေးခွေအစား နနွှင်းမှုန့်နှင့် နနွှင်းတက်ကို အသုံးပြုပါ။
၆။ အချိုရည်များနှင့် ဂျယ်လီများ
အချိုရည်ဗူးများတွင် တားမြစ်ဆိုးဆေး တာရှည်ခံဆေး သကြားထက်အဆ (၂၀၀) ပိုမို ချိုစေသော ပါဝါသကြားနှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် ကဖိန်းဓါတ်များပါဝင်၍ ခံတွင်းကင်ဆာ ကျောက်ကပ်ကင်ဆာ ဆီးချိုရောဂါ အဝလွန်ရောဂါ အသည်းကင်ဆာရောဂါတို့ကို ဖြစ်ပွားစေသည်။ ထို့အတူ ဂျယ်လီဗူးများတွင်လည်း တရုတ်မှလာသော ဂျယ်လီပေါင်ဒါ တာရှည်ခံဆေးအမျိုးမျိုး ပါဝင်၍ ကလေးများကို လုံးဝမကျွေးသင့်ပါ။
ကဖိန်း ကော်ဖီအနံ့ အချို့ကော်ဖီမစ်စ်များတွင် ထန်းလျှက်ဂျိုးများပါဝင်ပါသည်။ ထန်းလျက်ဂျိုးမှာ ရံဖန်ရံခါ သောက်သုံးလျှင် ပြဿနာမရှိသော်လည်း ရေရှည်နေ့စဉ်သောက်သုံးလျှင် ကင်ဆာဖြစ်စေ၍ မသောက်သုံးသင့်ပါ။
ထို့ပြင် ကော်ဖီမစ်စ်တွင် ပါဝင်သော (Creamer) မှာ နို့ဆီအရသာ မျိုးခံစားနိုင်ရန် ရေမှာ (Milk Fat) က အလွယ်တကူမပျော်ဝင်နိုင်၍ ပျော်ဝင်နိုင်သောအဆီ (Hydro generated vegetable fat) နှင့် အစားထိုးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကော်ဖီမစ်များကို ရေရှည်သောက်သုံးပါက ဆီးချိုရောဂါ သွေးတိုးရောဂါ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း နှလုံးသွေးတိုးရောဂါ စိတ်ကျရောဂါ ရင်သားကင်ဆာ ဆီးအိမ်ကင်ဆာ ဆီးကြိတ်ကင်ဆာ ပန်ကရိယကင်ဆာ အမျိုးသမီးများ ပဋိသန္ဓေမတည်နိုင်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေ၍ လုံးဝမသောက်သုံးသင့်ပါ။
သဘာဝကော်ဖီစေ့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကော်ဖီမှုံ့စစ်စစ် သကြား နို့ စသည်တို့ဖြင့် ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သော ကော်ဖီကိုသာ သောက်သုံးသင့်ပါသည်။
၈။ ရောင်စုံဆိုးဆေးများနှင့် အစားအသောက်များ
တားမြစ်အန္တရယ်ရှိ ဆိုးဆေးများအသုံးပြုထားသော မျှစ်နီမျှစ်ဝါ ပုဇွန်ချဉ်နီနီ အဝါရောင်ဆိုးထားသော ငါးပုဏ္ဏား ငါးမြွေထိုး ရွှေငါး ကြက်သား အရောင်ဆိုးထားသော ငရုတ်သီးမှုံ့ အရောင်တင်မှုံ့ နနွှင်းမှုံ့ ပုဇွန်ခြောက် လက်ဖက် လက်ဖက်ခြောက် ငပိ ပဲနီလေး ပဲဝါလေး မက်မန်းသီး ဆီးထုတ် ဒံပေါက်ဆိုးဆေး စသည်တို့သည် အသည်းရောဂါများ အစာအိမ်ရောဂါများနှင့် အစာအိမ်ကင်ဆာ အခြားကင်ဆာရောဂါများလည်း ဖြစ်စေတတ်သောကြောင့် လုံးဝရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။
၉။ အကင်များနှင့် ကင်ဆာရောဂါ
ပြည်ပနိုင်ငံမှ တင်သွင်းလာတဲ့ တုတ်ထိုးအကင်တွေမှာ သုံးထားတဲ့ တာရှည်ခံဆေးကလည်း ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပြီး ဒီအသားကင်တွေကို (Freezer) တွေ အအေးခန်းတွေမှာ သိုလှောင်ထားတဲ့ အတွက်လည်း အောက်စီဂျင်ဓါတ်တိုးမှု (Oxidation) ဖြစ်ပြီး ကင်ဆာရောဂါကို ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မသန့်တဲ့ ပြန်ကြော်ဆီ တွေနဲ့ ကြော်တဲ့အတွက် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ပြန်ရော။ ဒါကြောင့် အကင်များကို လုံးဝ လုံးဝ ရှောင်သင့်ပါတယ်။
၁၀။ သတိထားသင့်သော အသီးအနှံများ
ဓါတုဟော်မုန်းဆေးများအသုံးပြုထား၍ အဆမတန်ကြီးထွားနေသော မုံလာဥအဖြူများ အမြစ်တိုတို အလုံးတုတ်တုတ်နှင့် ပဲပင်ပေါက်များ ပိုးသတ်ဆေးအပြင်းစားသုံးထားသည့် ဂေါ်ဖီထုတ် ကိုက်လန် မုန်ညင်းရွက် ပန်းမုံလာထုပ် မုံညင်းထုတ်များ ဆေးစိမ်ဆေးဖျန်း၍ မှည့်နေသော သရက်သီး သင်္ဘောသီး လိမ္မော်သီး ပန်းသီး ငှက်ပျော်သီးစသည်တို့သည် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သဖြင့် ရှောင်ရှားသင့်သည်။
Organic ဟုခေါ်သော ပိုးသတ်ဆေးမသုံးပဲ သဘာဝအတိုင်းပေါက်သည့် သစ်ဥသစ်ဖု သစ်သီးဝလံများ မိမိခြံထွက်သရက်သီး ခရမ်းချဉ်သီး ရုံးပတီသီး ချဉ်ပေါင် ငရုတ်သီး စသည်များကိုသာ စားသုံးသင့်ပါသည်။
၁၁။ ဖော်မလင်ခေါ် ဖော်မယ်ဒီဟိုက်နှင့် ကင်ဆာအန္တရယ်
ယခုအခါ ပဲပြားများ ချက်နို့ဆီနှင့် မုန့်ဟင်းခါးဖတ် မုန့်တီ (နန်းကြီး)ဖတ်များကို တာရှည်ခံအောင် လူသေကောင်တံင် မပုတ်မသိုးအောင်အသုံးပြုသော ဖော်မလင်ကို အသုံးပြုနေကြပါသည်။ ၎င်းဖော်မလင်ခေါ် ဖော်မယ်ဒီဟိုက်အဆိပ်ဓါတ်သည် ကင်ဆာရောဂါအမျိုးမျိုးကို ဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်စေ၍ လတ်ဆတ်သော လက်ညှစ်မုန့်ဖတ်များကိုသာ ရွေးချယ်စားသုံးကြပါ။
၁၂။ သတိထားရမည့်ရေချိုငါးပိ ငါးခြောက်နှင့် ငံပြာရည်
အချို့ရေချိုငါးပိများတွင် ယူရီးယား(ပုလဲ) ဓါတ်မြေသြဇာ ထည့်သွင်း ထားကြောင်း သိရသဖြင့် ယူရီးယား (၃) ဂရမ်နှင့်အထက် စားမိပါက အော့အန်ခြင်း သတိလစ်မေ့မျောခြင်း ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းနှင့် အသက်ဆုံးရှုံးသည်အထိ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ငါးခြောက်များလှန်းရာ တွင် ယင်မနား လောက်မတက်စေရန် တရုတ်နိုင်ငံမှလာသော (၉၀%) ယင်ဆေးခဲခေါ် (Tri Chlorophon) ပိုးသတ်ဆေး အသုံးပြုကြောင်း သိရှိရ၍ စားသုံးမိပါက လေဖြတ်လေငန်းရောဂါ အာရုံကြော နှင့် ကင်ဆာရောဂါများ ဖြစ်ပွားစေသည်။
၁၃။ ကင်ဆာဖြစ်စေသော ဝါးတူ
တစ်ခါသုံးဝါးတူတွင် သာမန် မျက်စေ့ဖြင့်မမြင်ရသော အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်စေသည့် မှိုများပေါက်ဖွားလေ့ရှိသဖြင့် လုံးဝမသုံးသင့်ပါ။ သန့်ရှင်းသောဇွန်း ခရင်းကို အသုံးပြုပါ။
တရုတ်နိုင်ငံယူနမ်နယ်မှ တင်သွင်းသော တစ်ခါသုံးဝါးတူများတွင်လည်း မှိုမတက်စေရန် ကန့်ငွေ့ (Sulphur Dioxide) နှင့် (၄၈) နာရီ ပေါင်းခံပြီး ရေနံဖယောင်းနဲ့ အရောင်တင်တဲ့အခါ ကင်ဆာဖြစ်တဲ့ (Hydro Carbon) တစ်မျိုးပါလာပါတယ်။ ပြီးမှ ပိုဖြူသွားအောင် (Hydrogen Peroxide) ဆေးရည်နှင့်ပြုတ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ (Sodium Pyro Phosphate) တွေပါ ထည့်ပြုတ်တယ်။ ဒါကြောင့်ဝါးတူများကို လုံးဝ အသုံးမပြုကြပါနဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား အားလုံး ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသား အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာ၍ ဘေးဘယာဝေးကွာကြပါစေ။ ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာဆိုးများမှ၎င်း အခြားရောဂါဝေဒနာဆိုးများမှ၎င်း လုံးဝလုံးဝ ကင်းစင်ကြပါစေရှင်။
၂၀၂၂ ခုႏွစ္မွာ NUG ဟာ အစိုးရအလုပ္ေတြ လုပ္ျပေတာ့မယ္လို႔ ဦးမင္းကိုႏိုင္ ေျပာၿပီ…..
Posted on 08/01/2022 08/01/2022 Author Admin
၂၀၂၂ ခုႏွစ္မွာ NUG ဟာ အစိုးရအလုပ္ေတြ လုပ္ျပေတာ့မယ္လို႔ ဦးမင္းကိုႏိုင္ ေျပာၿပီ….. NUGဟာ ဒီႏွစ္ထဲမွာ အစိုးရအလုပ္ေတြကို လုပ္ျပေတာ့မယ္လို႔ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းကို ႏိုင္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ၂၀၂၂ခုႏွစ္ဟာ ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲခံမယ့္ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း NUGကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဦးရည္မြန္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဒၚဇင္မာေအာင္၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မန္းဝင္းခိုင္သန္းတို႔ကေျပာၾကားခဲ့သလို ဦးမင္းကိုႏိုင္ကလည္း ‘ေနာက္ဆုံးေကာက္႐ိုးတစ္မွ်င္’လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့PVTV ေတြ႕ဆုံခန္းမွာ အဲဒီလို ေဟာကိန္းထုတ္လိုက္တာပါ။ ‘အေရးႀကီးဆုံး တခ်က္က NUG က ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ကေတာ့ ေတာ္လွန္တဲ့ အင္အားစု … အခုကေတာ့ အစိုးရအလုပ္ေတြကို သူလုပ္ျပေတာ့မယ္။ သူရဲ႕ စိုးမိုးႏိုင္တဲ့ နယ္ ေျမေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြ တရားစီရင္ေရး၊ဥပေဒျပဳေရးကအစ ဒါက NUG ရဲ႕ အစြမ္းေကာင္းေကာင္း ျပရမယ့္ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေအာင္ပြဲအတြက္ တခါတည္း ဖိ႐ုံနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြ […]
Posted on 17/01/2022 17/01/2022 Author Admin
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မပါတဲ့ေတြ႕ဆုံမႈ အဓိပၸါယ္မရွိေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေျပာလာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မရွိမျဖစ္လို႔လည္း အသိေပး —People’s Spring ျမန္မာ့အေရးကိုၾကားဝင္ေျဖရွင္းၾကရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါတဲ့ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈဟာ အဓိပၸါယ္ ရွိမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး သီယိုဒိုယိုလိုဆင္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ စစ္ေကာင္စီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္တဲ့အေပၚကိုလည္း ရႈတ္ခ်လိုက္ပါေသးတယ္။ ဒါအျပင္ သူအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ ခံစားေနရတဲ့ဒုကၡေတြ သက္သာေစဖို႔နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္ပါဝင္လာဖို႔အတြက္ လာမယ့္ ရက္သတၱပတ္ေတြအတြင္း အာဆီယံ အဖြဲ႕ႀကီးက မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ အတူလက္တြဲ ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဟာ စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္း က အာဆီယံအစည္းအေဝးေတြမွာ ျမန္မာစစ္ေကာင္စီကိုဖယ္ထားသင့္တယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ေပးလာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ဒီလို ေျပာဆိုလာတာပါ။ […]
က်င္ငယ္ေရ သို႔မဟုတ္ ဆားငန္ေရ ၅၀၀ မီလီလီတာ ထည့္သြင္းထားလွ်င္ ၄၅ ရက္သုံးႏိုင္ေသာ မီးအိမ္ ဖန္တီးႏိုင္ၿပီ….
က်င္ငယ္ေရ သို႔မဟုတ္ ဆားငန္ေရ ၅၀၀ မီလီလီတာ ထည့္သြင္းထားလွ်င္ ၄၅ ရက္သုံးႏိုင္ေသာ မီးအိမ္ ဖန္တီးႏိုင္ၿပီ…. က်င္ငယ္ေရကေန လွ်စ္စစ္ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီ ကမာၻႀကီးရဲ႕ လူသား ဘီလီယမ္ေလာက္ဟာ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား မရၾကေသးဘဲ ေရရွည္တည္တန႔္ႏိုင္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။ အခုေတာ့ ကိုလမ္ဘီယာက ေရရွည္တည္တန႔္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအင္ေတြကို ဖန္တီးေနတဲ့ကုမၸဏီ E-Dina က အဲဒီ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ E-Dina က က်င္ငယ္ေရနဲ႔ ပင္လယ္ ဆားငန္ေရကကေန လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ မီးအိမ္ကို ဖန္တီးလိုက္ပါတယ္။ မီးအိမ္ကို WaterLight လို႔ နာမည္ေပးထားၿပီး ကိုလမ္ဘီယာ ေအဂ်င္စီ ၁ ခု ျဖစ္တဲ့Wunderman Thompson […]
အမေရိကန်စစ်တပ်၏ ပထမဆုံး စစ်မြေပြင်သုံး လေဆာလက်နက်
၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပ်က္စီးကိန္းႀကဳံလိမ့္မည္ဟု နကၡတၱေဗဒကြၽမ္းက်င္သူက ေဟာကိန္းထုတ္၊ မႏၲေလးမဟာသၾကၤန္စာက မင္းရာဇာႏွင့္ မိဖုရားအေပါင္း အႏၲရာယ္က်မည္ဟု ေဖာ္ျပ